Tucson Ankehitriny dia manohana ny fampahalalana Apple Maps Transit | Avy amin'ny mac aho
Tucson izao dia manohana ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka avy amin'ny Apple Maps
Tsikelikely, ny tovolahy avy any Cupertino dia manohy manampy fiasa vaovao ary manatsara ny fiasan'ny sarintany. Na dia tsy ho an'ny tsiron'ny tsirairay mihitsy aza ny hafainganana mandroso, farafaharatsiny Apple dia tsy mitsahatra miasa amin'ny fanatsarana azy.
Ny mpamaky MacRumors dia nampandre ny famoahana ny tanànan'i Tucson, any Airzona, fa efa azo io safidy io, satria Apple dia tsy nanavao tamin'ny fomba ofisialy ilay tranonkala izay ampahafantariny ny mpampiasa momba ireo tanàna efa nanolotra ity serivisy ity. Amin'izany fomba izany, na ny mponina amin'ity tanàna ity na ireo mpizahatany mitsidika azy, dia tsy afaka mivezivezy manerana ny tanàna raha tsy amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka.
Amin'izany fomba izany dia tsy ilaina ny manofa fiara na mampiasa taxi vao afaka mivezivezy eran'ny tanàna amin'ny fomba milamina sy tsotra. Amin'ny tsy fanavaozana ny pejin-tranonkala misy an'io Apple io karazana fampahalalana, tsy azontsika fantarina manokana izay serivisy efa misy amin'ny alàlan'ny Apple Maps, saingy azo inoana fa ho misy daholo izy ireo, ao anatin'izany ny serivisy fiaran-dalamby Amtrak, izay mamakivaky ny firenena manontolo manomboka amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny morontsiraka.
Apple dia nanomboka nampiditra an'io endri-javatra io tamin'ny famoahana ny iOS 9, ary nanomboka izao ny orinasa dia nanitatra ny fandrakofana atolotra azy manerantany amin'ny tanàna samihafa, ao anatin'izany ny Mexico City sy Madrid. Nandritra ny taona lasa, nitombo be ny isan'ireo tanàna, saingy rehefa nandeha ny volana, nihena io isa io niaraka tamin'ny tanànan'i Phoenix, any Arizona ihany koa, ny tanàna farany nanolotra an'ity vaovao ity tamin'ny Oktobra 2017 Tucson no tanàna voalohany nanombohana an'ity fampiasa amin'ny Apple Maps mandritra ny taona 2018.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Tucson izao dia manohana ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka avy amin'ny Apple Maps
Emmanuel alvarez dia hoy izy:
Fisalasalana: ahoana no ahafantarana hoe aiza ny toerana mifanaraka amin'ireo serivisy ireo?!
Valiny tamin'i Emmanuel Alvarez
Pedro Reyes dia hoy izy:
Ataoko fa manavao sy manampy toerana sy serivisy ao amin'ilay fampiharana izy ireo, izay efa nilaozana somary nilaozany tany Espana, raha ny fijeriko azy ireo dia tsy nanampy fanatsarana na fanampiana ho an'ireo mpampiasa izy ireo.
Valiny tamin'i Pedro Reyes
Vonona ny zava-drehetra ho an'ny fivorian'ny tompon-trano ao amin'ny Apple Park
LiFlex, fehin-kibo ho an'ny Apple Watch izay hanome anao fahaleovan-tena bebe kokoa